Audio လောက မသိသူများကို သေချာမရှင်းပြသော အလွဲများ | MT Electronics
အရွယ်အစား လက်မသာ ပြောမယ် Watts / Ohms မပြောဘူး
ယနေ့ Audio group များ Page များ တွင် မေးမြန်းသူများမှ အသံချဲ့ စက် တစ်လုံးကို မြင်သော အခါ "၁၅ ဘယ်နှစ်လုံးနိုင်လဲ?" "၁၈ ဘယ်နှစ်ပွင့်ဖွင့်လို့ ရသလဲ" စသည့် မေးခွန်းများ မေးနေကြပါသည်။ ထိုသို့ မေးမြန်းခြင်းအပေါ်တွင် အလွယ်ပြန်ဖြေခြင်းများ ဖြစ်သည့် "၁၅ လက်မ ၄ လုံး အပြင်းရတယ်" တို့ "၁၈ လက်မ ၂ ပွင့်တပ် ၁ စုံ အပြင်းတီးလို့ ရတယ်" ဟု ဖြေနေပါသည်။
စပီကာ နှင့် Subwoofer များသည် လက်မ အရွယ်အစားတူသော်လည်း အသုံပြုနိုင်သည့် ခံနိုင်ရည် Watts / တစ်ခါတစ်ရံ စပီကာ တစ်လုံးတပ် သည် 8 ohms ဖြစ်ရမည့် အစား4ohms ဖြစ်နေလျှင် စသည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု အသုံးပြုရာ နေရာကွာ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ကွဲပြားပါသည်။
ဥပမာ - ၁၅ လက်မ 2000 Watts စပီကာ ၂ လုံး = 4000 Watts -4ohms ရှိသလို / ၁၅ လက်မ 350 Watts စပီကာ ၂ လုံး = 700 Watts -4Ohms လဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ အခြားသော အရွယ်အစား လက်မ စပီကာများတွင်လဲ ထိုနည်းတူဖြစ်ပါသည်။ သို့ ရာတွင် သုံးစွဲသူထံတွင်ရှိသော စပီကာ ဧ။် watts နှင့် ohms ကို မသိဘဲ / မမေးမြန်းဘဲ လက်မအရွယ်အစားဖြင့်သာ အသံချဲ့ စက်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါလျှင် အသံချဲ့ စက်က watts များနေပြီး မိမိ စပီကာများ watts နဲ နေလျှင် စပီကာများ ပျက်စီးမည်ဖြစ်ပြီး / အသံချဲ့ စက်က watts နဲနေပြီး မိမိစပီကာများသည် watts များများ ခံနိုင်ရည်ရှိလျှင် လိုချင်သော အသံထွက် ပြင်းပြင်းရနိုင်မည် မဟုတ်ခြင်း စသည့် အဆင်မပြေမှုများကို တွေ့ ကြုံနိုင်ပါသည်။
Watts ကိုသိရုံနဲ့ လုံလောက်ပြီလား???
Watts ကိုသိပြီးလျှင် မှားနိုင်ခြေ ထက်ဝက်ကျော်ခန့် လျော့နည်းသွားပါပြီ။
သို့ သော် watts ကို သတ်မှတ်ခြင်း ၃ မျိုးထပ်ခွဲပါသည်။ ထို အမျိုးအစားများသည် Continuous , Program နှင့် Peak တို့ ဖြစ်ပါသည်။Continuous ကတော့ တူညီသော power ကို ဆက်တိုက် မရပ်မနားဘဲ သုံးနိုင်တဲ့ power ဖြစ်ပါတယ်။“Program” သည် ပို၍ သဘာဝဆန်သော input level အတက်အကျကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။“Peak” ကတော့ စပီကာရဲ့ အမြင့်ဆုံး ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် level ဖြစ်ပါသည်။ ထို level ဖြင့် အသုံးပြုပါက အပူ (Heat) အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ရုံသာမက စပီကာရဲ့ Driver ထဲမှာရှိတဲ့ Diaphragm များသည်လဲ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလျင်အမြန်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် ယခု level ကို အသုံးပြုလိုပါက အချိန်ခဏ သာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ထို watts ၃ မျိုးကွဲပြားမှု နှင့် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို မသိလျှင် (သို့ ) မိမိဝယ်ယူသော စပီကာသည် ထို သို့ အတိအကျ ညွန်းထားခြင်းမရှိလျှင် Peak watts ဖြင့် မိမိစပီကာ ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးလိုက်ပါက စပီကာ အပူလွန်ကဲ၍ လောင်သွားပါမည်။
Continuous , Program နှင့် Peak Watts အကြောင်းအသေးစိတ်ဖတ်ရန်နှိပ်ပါ။
Ohms (Resistance) လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုဆန့်ကျင်ခြင်းအညွှန်းကိန်း
Watts ကို သိပြီးနောက် သူနဲ့ ဆက်စပ်နေသည့် Ohms ကို သိဖို့ လိုပါသည်။ အလွယ်ဖြင့် သိအောင်ရှင်းပြရလျှင် စပီကာ (သို့ ) Subwoofer အတွင်းတွင် ဝင်လာသော လျှပ်စီးပမာဏကို တားဆီးပေးမည့် လူများဟုတင်စားနိုင်ပါသည်။Ohms တွင် 16 Ohms / 8 Ohms /4Ohms /2Ohms အစရှိသဖြင့် အသုံးများသော ပမာဏများရှိပါသည်။ 16 Ohms ရှိလျှင် ဝင်လာသော လျှပ်စီးပမာဏကို တားဆီးပေးမည့် လူ ၁၆ ယောက်ရှိသူဟု မှတ်ယူနိုင်ပြီး 16 Ohms ရှိသော စပီကာ ထက် 8 ohms ရှိသော စပီကာ သည် လျှပ်စီးကြောင်း ပိုမိုစီးဝင်နိုင်သဖြင့် အသံထွက်ပိုပြင်းပါသည်။ ထိုနည်းတူ Ohms အညွှန်းကိန်းနဲလေ အသံထွက်အား ပြင်းလေဖြစ်ပသါည်။ Watts အတူတူ Ohms မတူသော စပီကာများ (ဥပမာ - Peavey ဧ။် တစ်လုံးတပ် PBK Series မျာသည်4ohms ဖြစ်ပါသဖြင့် အခြားသော တစ်လုံးတပ်စပီကာများထက် အသံထွက်အား Force ပိုပြင်းပါသည်။
စပီကာ နှင့် Subwoofer တွင် ohms အညွှန်းကိန်းရှိသလို သူတို့ ကို Power ပေးမည့် အသံချဲ့ စက် Powered Amp များတွင်လဲ Ohms အညွှန်းကိန်းရှိပါသည်။ စပီကာ နှင့် Subwoofer တွင် ohms အညွှန်းကိန်း နှင့် အသံချဲ့ စက် Powered Amp များတွင်လဲ Ohms အညွှန်းကိန်း တူညီမှသာလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Set up ချိတ်ဆက်မှု မမှန်ကန်ခြင်း
အသံကို ထုတ်လုပ်ပေးမည့် စပီကာ နှင့် Subwofoer များကို Power ပေးမည့် အသံချဲ့ စက်များ နှင့် ၄င်းတို့ ကို ထိန်းချုပ်ပေးမည့် Mixer နှင့် အသေးစိတ်ချိန်ညှိပေးမည့် Sound Management ပစ္စည်းများ (Sound processor / EQ / Crossover အစရှိသည်) တို့ နှင့် မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ပေးရန်လိုပါသည်။
အသံထွက်သော်လည်း မှားယွင်းသော ချိတ်ဆက်မှုများကြောင့် ကောင်းမွန်သော အသံထွက်အမှန်မရရှိနိုင်ပါ။ ဥပမာ - သီချင်းဖွင့်ပေးမည့် CD မှ ထွက်သော AUX out ကို EQ ထဲသို့ ဝင်၍ ထို EQ မှ Mixer သို့ ဝင်ပြီး သုံးသူများအတွက် အသံထွက်ကောင်းကို မရရှိနိုင်ပါ။ Mixer မှ အရင်ပြင်ရမည့် အသံကို EQ မှ ထပ်မံ စစ်ထုတ်မှသာ ကောင်းမွန် မှန်ကန်သော နည်းစနစ်ဖြင့် အသံထွက်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အသံသည် လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ အသံကို အသံချဲ့ စက်မှ စပီကာသို့ ပို့ ခြင်း နှင့် Audio Source (သီချင်းဖွင့်စက် / CD / VCD / DVD / USB) / Bluetooth များမှ အသံကို ထိန်းချုပ်မည့် mixer သို့ ပို့ ခြင်းတွင် စပီကာကြိုးဧ။် Gauge အထူ နှင့် သုံးထားသော သတ္ထုအမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်၍ မူရင်းအသံကို အရည်အသွေးကို မပြောင်းလဲစေဘဲ DIstortion နှောက်ယှက်မှုကင်းစွာ ပို့ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စပီကာ / Subwoofer နှင့် အသံချဲ့ စက် အကောင်းစားကြီးတွေသုံးပါလျှက် Audio ကြိုးကောင်းတာကို မသုံးစွဲလျှင် ကားအကောင်းစား စီးပြီး ဆီကောင်းကောင်း မထည့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ မော်ဒယ်မြင့် ကားများသည် အင်ဂျင်ပါဝါ နှင့် နည်းပညာ မြင့်မားသဖြင့် ဆီကောင်းထည့်မှသာ ထုတ်ပေးနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ပြင့် ဆီမကောင်းခြင်းကြောင့် ကားဧ။် အင်ဂျင် အစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
ထို့ ပြင် ကြိုးများကို စနစ်တကျစွာ မှတ်သားတပ်ဆင်ခြင်းသည်လဲ စပီကာ အလုံးရေများစွာချိတ်ဆက်ချိန်တွင် အမှားအယွင်းမရှိစေနိုင်သော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသော ကြိုးများ ချိတ်ဆက်မှုအတွက် အမှတ်အသား မရှိ၍ လွဲမှားစွာတင်ဆင်ပါက အချိန်ကုန်ပြီး အသံထွက်ကောင်းရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
သိပ္ပံ နှင့် အနုပညာ ပေါင်းစည်းထားသော အသံနည်းပညာ